10 Nzvimbo Dzakanakisisa Kune Snorkeling MuEurope | Save A Train
musha > Kufamba Iceland > 10 Nzvimbo Dzakanakisisa Kune Snorkeling MuEurope
Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Rovedza Kufamba Portugal, Rovedza Kufamba Spain, Chitima Kufamba UK, Travel Europe, Kufamba Iceland
Sea Orchins, seahorses, yakajeka mhuka dzine mhuka, uye mamwe emvura akajeka pasi rose, snorkeling mune idzi 10 nzvimbo chiitiko chinotyisa-pfungwa. izvi 10 nzvimbo dzakanakisa dze snorkeling muEurope, uve nekuonekwa kunoshamisa pa 20 M. pasi pemvura, uye vari musha kune mamwe eanonakidza hupenyu hwegungwa pasi pano.
1. Nzvimbo Yakanakisa Kune Snorkeling MuUK: Devon
Kubva kuchitsuwa chine matombo kuenda kuLondon Bridge, kuchamhembe kweTor Bay, pano iwe unowana imwe yeakanyanya kunaka snorkeling nzvimbo muUK. Jewel anemones mune akateerana inopenya pingi uye yero, mussels, uye yakasarudzika tompot blennies hove, unogona kupedza zuva rese snorkeling muLondon Bridge.
Vazhinji vashanyi kuUK uye Devon vanogona kunge vasingatomboziva kuti ivo vari kuenda kune imwe yenzvimbo dzakanakisa dze snorkeling muEurope. zvisinei, Devon inonakidza snorkeling uye kudhiraina kuenda kuUK. Pamusoro peLondon Bridge, Lundy Island ndeimwe gem, nezvisimbiso zvegrey, mwedzi jellyfish, uye dolphins kuona.
2. Nzvimbo Yakanakisa Ye Snorkeling MuPortugal: Big Berlenga
Portugal inozivikanwa nemhenderekedzo dzayo dzinoshamisa, Berlenga Grande chitsuwa hachisi izvo. Just 10 km kubva kuPeniche, mumwe 10 most amazing surfing places in Europe, Berlenga chitsuwa chakanakisa. Inosanganisira 3 zviwi zvidiki zvemapako, rima bhuruu mvura, uye kuputsikirwa nechikepe.
Kana uchinge uchishamisika, unogona kuyemura kuputsika kwechikepe neiyo snorkeling giya. Mukuwedzera, inoshamisa yeAtlantic pasi pemvura yenyika yezvisikwa zvegungwa senge hove yezuva, nekorari, ichave yakamirira iwe kupfuura mask. Iyo yekare Fort San Juan Bautista yakatarisana nenzvimbo ino yakanaka ichave mumaziso ako paunouya, kuwedzera chakavanzika pane zvese zvakaitika.
3. Port Cros National Park, Furanzi
Kusvika pakadzika kwe 8 M. mune yakakosha snorkel nzira, unogona kunge uchiyemura mazana ehove muPort Cros national Park. Iyi yekare marina kuchengetedza nzvimbo ndeimwe yenzvimbo dzakanakisa dze snorkeling muEurope. Plage de la Palud ndiyo inzvimbo yakanaka yekutanga yako snorkeling adventure.
Mukupesana nedzimwe nzvimbo dzinoshamisa dze snorkeling pane ino chinyorwa, pano iwe uchawana 6 anodzidzisa maboys ane anonakidza echokwadi nezve zvisikwa zvegungwa zvaunosangana nazvo: Kumabvazuva kweAtlantic peacock yekumonera, kupendwa comber, zvisingawanzo dusky groupers, nedzimwe hove dzakawanda dzine mavara.
4. La Silfra, Aisirendi
rimwe nzvimbo dzakanakisisa dzekudonha pasi, zviri pachena kuti La Silfra inzvimbo inoshamisa yekuzeya nyoka muEurope. Kushambira pakati 2 Makondinendi eEurope, nemhuri, kana shamwari, mumvura inonyunguduka kubva kuLangjokull glacier, chiitiko chisingakanganwiki.
Silfra ndeimwe yenzvimbo dzakanakisa dze snorkeling mupasi, nekuda kwekuonekwa kunoshamisa mu 100 M. Mavara ari pasi pemvura, kushambira pakati penzira dzematombo nemakochi, uye kubwinya uku kwese kungori awa rimwe chete kubva kuReykjavik. Sezvo mvura ichiita kunge inotonhora zvakanyanya, iwe unofanirwa kushanyira iyo snorkeling rwendo, ine swimsuit yakakodzera uye giya kuti urambe uchidziya.
5. Red Island, Sardinia, Itari
Bvisa yakachena mvura inofanirwa kune inoshamisa chiitiko che snorkeling. Isola Rossa muSardinia ane mamiriro akanakisa ekunakidzwa ne snorkeling: mvura yakachena, matombo nenzvimbo nemapako, marina hupenyu hunozopusha pfungwa dzako, uye chena jecha mahombekombe kuti ubate mweya wako, pakati pezvikamu zve snorkeling.
Iwe uchawana musha wevaredzi vadiki, Isola Rossa kuNorth-West Sardinia. Corals, hove, uye matombo matsvuku ndiwo mamiriro akakodzera ezororo rezhizha. Pamusoro pekushambidza nezuva, unogona kunakidzwa nemitambo yemvura, scuba diving, uye kufema mhepo kumahombekombe eItari. saka, iva nechokwadi chekurongedza mabhegi asina mvura, uye kamera yepasi pemvura yekurangarira pasi pemvura yenyika yeSardinia.
6. Cabrera Archipelago National Park, Speini
19 zvidiki zvidiki zvinosanganisa nzvimbo yeCabrera, kumba kune inoshamisa marine ecosystem, isina kubatwa nevanhu. Bako rebhuruu, iyo maritime nature reserve ndeimwe yevakapfuma muEurope, uye pane yako snorkeling expedition, iwe uchawana zvinopfuura 500 mhando. Scorpionfish, octopuses, leatherback turtles, ingori mashoma ezvisikwa zvegungwa zvaunosangana nazvo.
Uyezve, unogona kuwana mukana unoshamisa wekuona mamwe ma dolphin kubva muchikepe, uchienda kuCabrera. Mhenderekedzo yegungwa yeSpain ndeimwe yenzvimbo dzinozivikanwa zhizha muEurope, uye Mallorca inzvimbo inorota yekumahombekombe kune vafambi vanobva kumativi ese epasi. saka, kurongedza swimsuit yako uye snorkel giya, yerwendo rusingakanganwike uye rwunozorodza kuCabrera.
7. Walchensee Nyanza Munich
Zvikuru, bhuruu, uye zvakadzika, nyanza Walchensee igungwa rakanaka reAlpine muGerman. 75 KM kubva kuMunich, ino snorkeling yekuenda iri mune pakati penzvimbo yeBavaria. saka, paunouya kumhepo nekuzorora, ari maonero anoyevedza akakukomberedza ipa iyo yakadzikama kwazvo marongero ehuitiko hwamwari.
Nekuonekwa kukuru pa5m kusvika 20m, nyanza Walchensee ndeimwe yeiyo 10 nzvimbo dzakanakisa dze snorkeling muEurope. Uyezve, iwe unogona kuongorora zvakadzama uye kupfuura kupfuura muraraungu trout uye eels, mudziva remvura rakajeka, paunenge uchienda kunonyudza muLake Walchensee.
Nepo vanhu vazhinji vachikuudza iwe snorkeling muGungwa reMediterranean chiitiko chinoshamisa, rwizi snorkeling runoshamisa. Yakadzikama nyowani turquoise mvura, kumusoro kweAustria, Viecht am Traunfall ndiyo yakanakisa nzvimbo ye snorkeling muAustria. Viecht am Traunfall rwizi musha kune akanaka makorari, uye parwendo rwako kuenda kune runako urwu, iwe unozokokwa kudombo kusvetuka uye canyoning.
saka, snorkeling muAustria Alps ndechimwe cheanonakidza zviitiko zve snorkeling muEurope. Paunenge wapedza yako snorkeling rwendo, zvikomo zvakasvibirira uye maonero erwizi ndiwo picnic yakakwana uye nzvimbo yekuzorora. pano, unogona kudzokorora zvinoshamisa zvepasi pemvura pfuti iwe wawana, uye unakirwe nemhepo yakachena yemakomo muAustria Landscape.
Salzburg kuenda kuVienna Nechitima
Munich kuVienna Ine Chitima
Graz kuenda kuVienna Nechitima
Prague kuenda kuVienna Nechitima
9. Medes Islands Spain
Iwo maMede Islands zvikamu zveyakanaka zvisikwa yakachengetedzwa del Montgri. Inowanikwa mune yekupedzisira Spanish zhizha kuenda, Costa Brava, vaMedhia vane musha kune hunoshamisa hupenyu hwemugungwa. Kana iwe uchifadzwa nehupenyu hwemumvura, ndokuzoita snorkeling apa, chichava chisingakanganwiki.
Zvitsuwa zvinomwe zvevaMedhia, pamhenderekedzo yeCatalonia, yakakomberedzwa neGungwa reMediterranean rinotonhora pane paradhiso inofema. Saizvozvo, snorkeling muMedhia ndechimwe chezvinhu zvepamusoro zvekuita uchizorora muCosta Brava. With vana, shamwari, kana wega, vaMedhia vanogara kumhuka dzakanaka, seahorses, nyeredzi dzegungwa, uye barracudas.
10. Nzvimbo Dzakanakisisa Kune Snorkeling MuEurope: Elba Italy
Vatsvuku vegorgoni kune rimwe divi, matsvuku uye matema makorari kune rimwe divi remahombekombe, Elba iparadhiso. Bay yeSant Andrea pachitsuwa cheElba ndipo panotangira chero ruzivo rwepasi pemvura. Kure nechiteshi uye promenade, hupenyu hwemugungwa mune ichi chiTuscan chitsuwa chinoshamisa.
Mukuwedzera kune akanaka makorari, hove, nemhuka, iyo Italian mhenderekedzo ndeimwe yeakanakisa pasirese. saka, kana iwe uchida kubata mweya wako pakati pebako uchitsvaga uye kutsvaga sunfish, ipapo nzvimbo dzejecha dzeElba ndiyo nzvimbo yekuzorora yakakwana.
Florence kuMilan Nechitima
Milan kuFlorence Nechitima
Venice kuMilan Nechitima
pano pa Save A Train, tichave tichifara kukubatsira kuronga rwendo rusingakanganwike kune nyika dzinoshamisa pasi pemvura mune idzi 10 nzvimbo dzakanakisisa dze snorkeling muEurope nechitima.
Iwe unoda kupinza yedu blog positi "1o Nzvimbo Dzakanakisa Kune Snorkeling MuEurope" kupinda yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsn%2Fbest-places-snorkeling-europe%2F- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Britain, Chitima Kufamba China, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba UK, Travel Europe
EU To Ushandise Mabhiriyoni Of Euros In European Travel By Zvitima
chitima mari, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Sweden, Travel Europe